“စည်းလုံးခြင်းသံစဉ်”အွန်လိုင်းရေဒီယို မိတ်ဆက် ~ White Angel
11:41 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 8 comments
“အဖြူရောင်သံစဉ်အွန်လိုင်းရေဒီယို”သည် (၅)နှစ်ကြာ ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး (၁၀.၀၈.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် “စည်းလုံးခြင်းသံစဉ်” အွန်လိုင်းရေဒီယိုကို လည်းကောင်းဝန်ထမ်းများဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
တေးချစ်သူများအတွက် အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားမယ့် စည်းလုံးခြင်းသံစဉ်~MUMC ကို အားပေးနေကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Online Radio မှ ၂၄ နာရီ တေးချစ်သူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တေးသီချင်းများကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါကြောင်းနှင့်
MUMC Radio ရဲ့ တေးသီချင်းထုတ်လွှင့်မှုများကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ဆိုရင် MUMC FAN PAGE မှ ပို့စ်များကို Share လုပ် ခြင်း / Gtalk တွင် songrq4radio@mumcrew.net ကို add ပြီး သီချင်းတောင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
>>Chat Room>> http://chat.mumcrew.net/.
Sis, plz check the link aboove coz i saw your pic & the article is not matching. :(
sis plz check the above link coz your pic and the article is not matching. :(
ငါ့ညီမက သတင်းလည်းရေးတယ်ဟ။ အဖြူရောင်သံစဉ်ကဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်။ သူတို့လည်းတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းခဲ့ကြတာပါပဲ။ အားပေးပါတယ်။ အောင်မြင်ပါစေ။